Articles – Page2– Bachan Tv
अष्ट्रेलियामा पनि छोडेनन् जीवनले सुसमाचार प्रचार गर्न
Posted on January 9, 2019 January 9, 2019 by BACHAN TV
जीवन बचाऊ नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक तथा नेपाल गोस्पल चर्चका डिकन श्री जीवन रायमाझी हाल अष्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ । उहाँले अष्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरिरहनुभएको छ । उहाँको जोश झन् झन् बढ्दै गइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालमा सुसमाचार सुनाउन नेपाली मात्र पाउँथे, तर यहाँ अष्ट्रेलियामा त नेपाली लगायत बिभिन्न देशका मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने मौका पाइरहेको छु । केही महिना अघि मात्र अष्ट्रेलिया पुग्नुभएको रायमाझी दम्पत्तिको जीवनशैली नै सुसमाचार सुनाउनुजस्तै बनेको छ । उहाँको जीवन गवाहीद्वारा धेरै मानिसको जीवन परिवर्तन हुनुका साथै धेरैले उत्साह पाएको कारण उहाँ आफैपनि उत्साहित हुनुभएको छ । उहाँको नाम नै जीवन भएकोले हो कि उहाँ सबैले ख्रीष्टमा जीवन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक सेवा मार्फत् परमेश्वरको राज्यमा उद्धार र सुधारको काम गर्न सकिने भन्दै मण्डली, संघ, संस्था समुदायसँग सहकार्य गर्दै अनाथ, असहाय हिंसा पीडित महिला, झ्यालखानामा भएका बन्दीहरूमाझ सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ । सुसमाचार नै सम्पूर्ण मानवजातिका लागि उद्धार र सुधार को कडी हो भन्ने रायमाझी कसैसँग भेट भयो कि सुसमाचार सुनाउने मौका लिइ हाल्नुहुन्छ । हाल सिड्नीको रेल्वे स्टेसन, पार्क तथा अन्य ठाउँहरू उहाँको सुसमाचार सुनाउने सहज स्थल बनेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो येशू प्रभुको आज्ञा हो, संसारको जुनसुकै कुनामा रहेपनि प्रभुको आज्ञा पालन गरिरहने छु । यसैमा जीवनमा साँचो आनन्द छ ।
कुन प्रेरितको मृत्यु कहाँ भयो ?
Posted on December 26, 2018 December 26, 2018 by BACHAN TV
१) युहन्ना दाजु याकुब
प्रेरितहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले मारिने प्रेरित यिनी नै थिए। ई.स. ४४ मा याकुबलाई हेरोदले तरवारले काटेर मृत्युदण्ड दिए। उनी यतिसम्म प्रचार गर्दथे कि उनको पहराको लागी खटाइएको रोमी सिपाहीलाई समेत उनले ख्रीष्टियन बनाइसकेका थिए। उनको मृत्युदण्डको दिन त्यस सिपाहीलाई तरवार उठाएर याकुबमाथि प्रहार गर्न भनियो। उसले तरवार उठायो तर उसको तरवार रोकियो। उसले याकुबको पहरामा बिताएको समयमा आफुपनि ख्रीष्टियन भएको कुरा सबैका सामु स्विकार गर्‍यो। हेरोदले त्यो सिपाहीलाई पनि याकुबसँगै मृत्युदण्ड दिने आज्ञा दिए। र दुवैको शिर काटियो। शिर काट्ने तयारी हुदा याकुबले त्यो सिपाहीलाई भने, भाई केही क्षणमा नै अमरत्वको देशमा भेटौला।
२) पत्रुसको भाई अन्द्रियास
यीनले इथियोपिया, साइथियन र सेसीमा सुसमाचार प्रचार गरेका थिए। उनले यि क्षेत्रहरुमा जबरजस्त तरिकामा ख्रीष्टका प्रचार गरे। थुप्रै मानिसहरुलाई प्रभुमा ल्याएँ। मण्डलीहरु सुरु गरे। उनलाई एडेसिजका राज्यपाल एजीयसले सुसमाचार प्रचार नगर्न चेतावनी दिएँ। तर उनले उनको चेतावनीको परवाह गरेनन् । उनले निरन्तर रुपमा प्रचार कार्य जारी राखे। राज्यपाले अन्द्रियासलाई क्रुसमा टाँगेर मृत्युदण्ड दिने आदेश दिए। जब उनलाई क्रुसमा टाँगेर मृत्युदण्ड दिनलाई लगिदैथियो, उनले टाँढाबाट क्रुसलाई देखे र यसो भने, “लामो समयदेखी मैले प्रतिक्षा गरिरहेको हे क्रुस तिमीलाई स्वागत छ। क्रुसमा चढ्ने ब्यक्तीकै चेला भएकोले म खुशीसाथ, आनन्दले र स्वइच्छाले तिमीकहाँ आउदैछु। म् तिम्रो प्रेमी हुँ। तिमीलाई अङ्गाल्नु मेरो सौभाग्य हो।” त्यहाँ उनले क्रुसलाई अङ्गालो हाले र उनलाई त्यसपछि क्रुसमा टाँगियो। उनले क्रुसको पिडादायी स्थीतीमा पनि त्यहाँ रहेका मानिहसरुलाई प्रचार गरिरहे सिपाहीहरुले उनी चाडै मरेका होउन भनि उल्टो क्रुसमा टाँगे। तर उनी अझै पनि प्रचार गरिरहे। अन्तिममा सिपाहीले बञ्चरोले उनको टाउकोमा हिर्काए र उनलाई मारिदिए।
मर्कुस पत्रुसका दोभाषे थिए। पत्रुस कम पढेलेखेका मानिस भएको हुनाले उनलाई त्यसबेलाका कति भाषाहरुको ज्ञान थिएन। त्यसकारण अनुवादको लागी पत्रुसले मर्कुसलाई साथमा लिएर जाने गर्दथे। पत्रुसबाट उनले येशुका कथाहरु सुने र त्यसैलाई पुस्तकको रुपमा तयार गरे। जो बाइबलमा मर्कुसको सुसमाचारको रुपमा प्रख्यात छ। परम्परा अनुसार मर्कुस मिश्रको अलेक्जेन्ड्रियामा गएर सुसमाचार प्रचार गरे। त्यहाँका मानिसहरुले उनलाई रथमा टाँगेर जमिनमा धसारेर मारे। उनले त्यहाँ कप्टिक मण्डली पनि स्थापना गरे जो अहिले इजिप्टको सबैभन्दा ठुलो ख्रीष्टियन सँगठन हो। उनका हड्डीहरु अझैपनि इजिप्टको कुनै चर्चले सुरुक्षीत राखेको छ।
४) पत्रुसको मृत्यु
पत्रुसले रोममा प्रचार कार्य गरे। ई.स. ६८ मा रोमी सम्राट नेरोले यिनलाई पक्राउ गरे। नेरो अति नै दुष्ट सम्राट थिए। उनले पत्रुसलाई क्रुसमा टाँगेर मृत्युदण्ड दिने आज्ञा दिए। तर पत्रुसले आफु येशु ख्रीष्ट झै सुल्टो क्रुसमा टाँगिन योग्यको नभएको भन्दै उल्टो क्रुसमा टाँग्ने आग्रह गरे। अन्त्यमा सिपाहीहरुले उनलाई उल्टो क्रुसमा टाँगे र उनको मृत्यु भयो। उनको चिहान अझै पनि सेन्ट पिटर्स चर्च को बेदि मुनी रोममा सुरुक्षीत छ। रोमन क्याथोलिक मण्डलीका पोपले सम्बोधन गर्नका निम्ती बनाइएको स्थान मुनि पत्रुसको हड्डीहरु छन् भन्ने बिश्वास गरिन्छ।
फिलीप र उनका दुई छोरीहरुलाई हिरापोलिसमा शहिद बनाइयो । तर उनलाइ कसरी मारियो भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट एतिहासीक प्रमाणहरु भने छैनन्।
परम्परा अनुसार उनले इराकमा र भारतको उत्तर–पश्चिम भुभागहरुमा प्रचार गरेका थिए। उनले भारतमा त्यहाँको स्थानिय भाषामा मत्तीको सुसमाचारलाई पनि अनुवाद गरेका थिए। उनलाई आरमेनिया देशमा क्रुसमा उल्टो पारेर टाँगेर हत्या गरियो।
७) अल्फयासको छोरा याकुब
परम्परा अनुसार उनले स्पेनसम्म गएर प्रचार गरेका थिए। उनलाई पक्कै पनि मारिएको थियो। तर कहाँ र कसरी मारियो भन्ने बारेमा कुनै निश्चयता छैन।
८) सिमोन कनानी
यीनले बेलायतमा गएर प्रचार कार्य गरे र थुप्रै मण्डलीहरु स्थापना गरे। उनलाई त्यही नै मारेर शहिद बनाइयो भन्ने कुरा परम्पराले हामीलाई बताउँदछ।
९) कर उठाउने मत्ती
परम्परा अनुसार उनले इथियोपियामा गए र त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्य गरे। उनल थुप्रै इथियोपियाली र मिश्रीहरुलाई प्रभुमा ल्याएँ। त्यहाँका राजा हेरकेनश मत्तीसँगै साह्ै क्रोधित भए र उनलाई भालाले हानेर मार्ने आदेश दिए। उनले येशुको जीवनी लेखेका छन् जो मत्तीको सुसमाचारको नाउँले बाइबलमा प्रख्यात छ।
१०) येशुका भाई याकुब
यिनी मण्डली इतिहासमा प्रार्थनाका योद्धा भनेर चिनीन्छन्। मण्डली इतिहासकारहरुको भनाई अनुसार उनले यति समय प्रार्थनामा बिताउँथे कि उनको घुडाको छाला ऊटको छाला जस्तो भएको थियो। उनलाई येरुशलेमका प्रधान पुजाहारीहरुले पक्रे र येशुलाई अस्विकार गर्न आज्ञा गरे। याकुबले अस्विकार गरेपछि उनलाई मन्दिरको टुप्पोमा लिएर राखे र फेरी पनि अस्विकार गरे त्यहाँबाट धकेलिदिने चेतावनी दिएँ। याकुब मन्दिरको टुप्पामा गए र येशु नै मशिह हुनुहुन्छ भन्दै आफै हाम फाले। उनी अझैपनि जिवितै थिए तर पछि भिडले उनी माथि ढुङ्गा बर्सायो र उनको मृत्यु भयो।
थोमा प्रचार गर्न भारतमा आए। उनी भारतमा ई.स. ५१ मा आएका थिए। उनले मद्रासको मलावार क्षेत्रमा सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गरे। उनले त्यहाँ येशुको नाउँमा आश्चर्यकर्महरु गरे र मृतकहरुलाई पनि जिवित तुल्याएँ। उनले त्यहाँ ७ वटा ठुला ठुला मण्डलीहरु स्थापना गरे र एल्डरहरु नियुक्त गरे। अन्त्यमा उनलाई त्यहाँका राजाले मार्ने आदेश दिइयो र उनलाई भालाले घोचेर मारियो। उनको चिहान अहिले पनि दक्षिण भारतको मद्रासको चेन्नईमा सुरुक्षीत छ।
१२) प्रेरित पावल………….
प्रेरित पावल पहिलो रोमी कैदबाट छुटे र केही बर्ष प्रचार कार्य गरे। सम्राट नेरोले ई.स.६८ मा उनलाई पुनःपक्राउ गरे र रोम शहरको बाहिर त्रेफोनतेन (त्रेतन फुहाराहरु) भन्ने ठाउँमा शिर काटेर मृत्युदण्ड दिइयो। त्यस ठाउँको नाउँ पहिले अर्कै थियो तर पावलको शिर काटेपछि उनको छिनालिएको टाउँको तिन पटक उफ्रेको र उनको शरिरबाट ३ पटक ठुला ठुला रगतका धारा बगेको कारणले त्यस ठाउँको तिन फुहाराहरु राखियो। पछि तेस्रो शताब्दीमा सम्राट कन्टन्टाइनले उनको चिहानमा मण्डली बनाएँ जो सेन्ट पौल चर्च हो। पावलको अवशेष अहिले पनि सेन्ट पौल चर्च रोमको बेदी मुनी सुरुक्षीत छन्।
येशुका चेलाहरुमध्ये कालगतीले मर्ने चेलाहरुमा युहन्ना मात्र पर्दथे। तर उनले थुप्रै यातनाहरु सहनुपरेको थियो। सम्राट डोमिसियनले उनलाई उम्लैदै गरेको तेलको कराहीमा हालिदिएको थिए तर उनी त्यहाँपनि बाँच्न सफल भए। त्यसपछि उनी कठोर परिश्रम गरेर मरुन् भनेर पत्मोस टापुमा लगियो तर उनले त्यहाँ येशु ख्रीष्टबाट प्रकाश पाए र प्रकाशको पुस्तक लेखियो। परम्परा अनुसार उनले येशुकी आमा मरियमलाई लिएर एफिससमा गएर बसेका थिए। पछि त्यही नै येशुकी आमा मरियमको मृत्युभयो। यहुन्ना पनि उमेर खाएर मरे। भनिन्छ उनी मानिसहरुलाई देख्न पनि सक्दैनथे र मण्डलीका भाईहरुले उनलाई बोकेर सङ्गतीमा ल्याउने र लैजाने गर्दथे।
अन्त्यमा, सबै चेलाहरुले बिभीन्न ठाउँमा गएर प्रचार कार्य गरे र तिनीहरु येशुको निम्ती मारिए पनि। सुसमाचार समृद्धी र आशिशको सुसमाचार हो तर त्यो भन्दा बढ्ता यो त्याग र बलिदानको सुसमाचार पनि हो।I
ख्रीष्टमसको अमोल उपहार
Posted on December 16, 2018 December 16, 2018 by BACHAN TV
हामीजस्ता सर्वथा पापीलाई सर्वोच्च कृपालु परमप्रभुले अत्यन्तै दया गरेर उहा“को सर्वोत्तम उपहार आफ्नो पुत्र हामीलाई नै दिनुभयो । त्यसैको कारण हामीले हाम्रा आत्माको मोक्ष पाएका छौं । हामी उहाँका शत्रुहरूको लागि यो सित्तैको अनमोल र अगम्य प्रेमको सर्वोत्कृष्ट नमुना हो । यस्तो अथाह प्रेम कसैले कहिल्यै कसैलाई गरेको छैन । उहाँको प्रेम निष्कपट र अशेष छ ।
परमेश्वरले हामीलाई उहाँका पुत्र येशूमा सबै आशिष् र अनुग्रह दिनुभएको छ अनि यो कुरा हो र आमेन हो । सबै आशिष् र प्रतिज्ञाका हकदार बनाएर परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा स्वर्गीय स्थानहरूमा दिनुभयो ।
हामीले कुनै परिश्रम नगरी, पसिना नबगाई सित्तैमा अनमोल कृपा र हाम्रा पापको क्षमा पायौं । विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट हामीले सबै कुरा पाएका छौं । येशूले क्रूसमा हाम्रो निम्ति सबै कुरा प्राप्त गरिदिनुभयो । स्वार्थी मानिसलाई दिइएको यो अनमोल उपहार मानिसले पाएकोमा मानिस धेरैपल्ट कृतज्ञ होइन । कृतघ्न बनेको छ । हामी सबै कुरा आफ्नै शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्न प्राप्त गर्न चाहन्छौं ।
दिने पिताका हामी सन्तान बनेका छौं । परमेश्वरले हक दिनुभएर नै हामी उहाँका सन्तान बनेका छौं । येशूको मृत्युले मानव इतिहासलाई नयाँ मोड दियो र परमेश्वरले येशूको बलिदानलाई स्वीकृति दिनुभएर नै यी सबै कुरा सम्भव भएको हो ।
हाम्रा परमेश्वरले दिनुभएको यही उपहारलाई सम्झेर नै हामी ख्रीष्टमस मनाउँछौं । परमेश्वरले दिनुभएको उपहर पाएर नै हामी यसको योग्य बनेका हौं ।
परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ । अदृश्य परमेश्वरको महिमा येशूले हाम्रा समक्ष प्रकट गर्नुभएको छ ।
येशूले देओ त दिइनेछ भनेर सिकाउनुभयो र सबैको लागि आÏनो प्राण दिनुभयो । येशूका चेलाहरू र सुरुको मण्डलीले दिने कार्यलाई प्राथमिकता दियो र परमेश्वरको सेवामा धेरैले दिइरहे ।
हामी त्यही दिने परमेश्वरका सन्तान हौं । त्यही नयाँ स्वभाव हामीले पनि येशूमा विश्वास गरेपछि पाएका छौं । हाम्रो पुरानो मान्छे वा लोभी स्वभाव पनि क्रूसमा टाँगिएको छ । अब हामी नयाँ मन भएका नयाँ मानिस हौं । दिने कुरा हाम्रो स्वभाव र चरित्र हो । यसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम अरू मानिसमा प्रकट गर्न मद्दत गर्छ । अब हामीले प्रेम र सत्यतामा ख्रीष्टको सुसमाचार र सबैलार्इ सुनाउनुपर्छ । हामीले अरूलार्इ दिन सक्ने अमोल उपहार यही हो ।
यो ख्रीष्टमसमा परमेश्वरले तपाईंलाई यसै गर्न अगुवाइ गर्नुभएको होस् ।
येशु ख्रीष्टको बाह्र वर्ष र तीस वर्षको बिचको समय…
Posted on August 27, 2018 August 27, 2018 by BACHAN TV
प्रभु येशु‌ ख्रीष्टको जीवनको १२ वर्ष देखि ३० वर्षको बिचको समयलाई बाइबलमा लेखिएको छैन भनेर यसलाई केहि बिरोद्धीहरुले बिवादष्पद (controversy) बिषय बनाएका छन्। यसलाई “येशुको १२ वर्ष र ३० वर्षको बिचको रहष्य” भन्ने बिषयमा किताब सम्म लेखिएको छ.. तिनी त्यस समयमा भारत देशमा आएर साधु-सन्तहरु संग शिक्षा लिए यसकारण उनले दिएको शिक्षा पनि हिन्दु शास्त्र संग मेल खान्छ भन्ने आरोप लगाएका छन् अनि तिनको चिहान पनि काश्मिरमा‌ छ भन्ने आधारहिन कुराहरु लेखेर मानिसहरुलाई भ्रमित बनाएको छ तर प्रभु येशुको त्यस समयको बिषयलाई बुझ्नु हो भने हामीले बाइबलमा यहुदि जातिलाई‌ परमेश्वरले दिनुभएको ब्यवस्था, जीवन शैली, संकृति र परम्परालाई ‌पनि अध्यन गर्नु पर्छ। बाइबलमा सबैकुरा लेखिएको छैन तर सिधान्तहरु (principles) दिएको छ जसको आधारमा बाइबल स्पस्ट संग बताउँदछ येशुको त्यस समयको बिषयमा।
यहदि जातिहरुमा ब्यवस्था अनुसार पुरुषहरुको बाह्र वर्ष र तीस वर्षको उमेर अति महत्वपूर्ण हुन्छ, किनभने तिनीहरु बाह्र वर्षको उमेरमा व्यवस्थाको पुत्र हुन्छन् अनि त्यस उमेर देखि उत्ता तिनीहरु पुरुषको गन्तीमा आउछन् भने तीस वर्ष को उमेर नपुगे सम्म एउटा यहुदि पुरुषले परमेश्वरको सेवा गर्नु र सभाघर (Saynagogue) मा व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढ्नु पाइन्दैन थियो। (गन्ती ४:३)
यसकारण प्रभु येशुले पनि त्यस समय सम्म‌ पर्खिनु भयो। (लुका ३:२३)
किनभने उहाँले जे गर्नुभयो त्यो व्यवस्था अनुसार गर्नुभयो।
येशु आफ्नो घरनामा‌ जेठा छोरा थिए तर यहुदि व्यवस्था अनुसार (पहिला‌ जन्मिएको हरेक थोक) जेठालाई मन्दिरमा अर्पण गर्नुपर्थ्यो। (गन्ती १३:१-२)
तर घरमा जेठाको अवश्यकता परे मन्दिरको नियमको तिरो तिरेर घरमा फर्काउन सकिन्थ्यो। (गन्ती १३:१३)।
यसरी उकासेेर ल्याएको ब्यक्तिलाई यहुदि परम्परा अनुसार बाबुको काम सिक्नु पर्ने हुन्छ। येशुको बाबु योसूफ सिकर्मी (carpenter) थिए (मत्ती१३:५५) यसकारण उनले येशुलाई‌ आफनो काम सिकाए।
येशु एक सिकर्मी भएको कारणले तिनको बिषयमा चर्चा गर्दा उनको काम संग जोडेर “के यिनी त्यही सिकर्मी होइनन् र ?” भनेका छन् (मर्कूस ६:३)। यसकारण यो कुरा स्पस्ट हुन्छ कि प्रभु येशु ख्रीष्ट आफ्नो जीवनको बाह्र र‌ तीस वर्ष उमेरको बिचमा कहिले पनि भारत मा आउनु भएन तर घरमा नै बसेर बाबु संग सिकर्मी काम सिकेर आफ्नो परिवारको अभिभार उठाउनु भयो। यदि भारतको काश्मिरमा येशुको चिहान छ भने त्यो कुनै पनि येशुको हुनु सक्छ जो इस्राएलबाट आए होला जसको निम्ति हामीलाई कुनै मतलब छैन।
त्यो येशु, हामीले विश्वास गरेको येशु ख्रीष्ट चाहि कदापि होइन किनभने यहुदि समाजमा येशु नाउँ एउटा प्रचलित र कसैले पनि राख्नु सक्ने नाउँ थियो। बाइबलमा यहोशू, योशूफ, येशुुवा आदि नाउँहरुको प्राय एउटै अर्थ हुन्छ “उद्धारकर्ता” (savior or the Lord saves) यसकारण बाइबलमा एकजना मात्र येशुको नाँउ लेखिएको छैेन तर अरु पनि थुप्रै येशुको नाँउ छन् (२कोरिन्थी११:४, कलस्सी ४:११) तर हामीले विश्वास गरेको येशु चाहि “ख्रीष्ट” हुनुहुन्छ।(मत्ती २७:१७)। ख्रीष्टको अर्थ ग्रिक भाषामा “अभिषेक गरिएको” (anointed or chosen one) अनि हिब्रुमा “मसिहा” (Messiah) भन्ने हुन्छ। (मत्ती १६:१३-२०, युहन्ना १:४०-४२, प्रेरित ३:१७, १यहन्ना ५:१)
उहाको नाँउ सगं “ख्रीष्ट” जोडिए पछि अरु कुनै पनि येशु नाँउ संग त्यो नाँउको तुलना गर्नु सकिन्दैन। प्रभु येशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति परमेश्वर दुवरा अभिषेक गरिएको निष्कलंक थुमा हुनुहुन्छ उहाले आफ्नो बोलावट अनुसार परमेश्वरको उदेश्यलाई पुरा गर्नुलाई कलभरी डाँढामा क्रुशमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो तर भारतको काश्मिरमा होइन यसकारण हामी भ्रममा नपरौं
परमेश्वरलाई‌ महिमा होस।
एन.सी.एफ. नेपालका नवनियूक्त महासचिवको स्वागत तथा पदभार ग्रहण
भदौ १०, २०७५ कुसुन्ती, ललितपुर
एन.सि.एफ नेपालको केन्द्रिय कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि नवनियूक्त महासचिव एल्डर सेर ए.सी.लाई भव्य स्वागत गरिएको थियो भने निवर्तामान उपमहासचिव डा. कर्णबहादुर तामाङज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिर्दै विदाई गरिएको थियो । केन्द्रिय उपाध्यक्ष रेभ बी.बी कार्कीले शुरुको प्रार्थना गर्नुभएपछि औपचारीक रुपमा अगाडी बढाईएको स्वागत तथा विदाई कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै एन.सि.एफ. नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष रेभ. सुर्य बहादुर बल तामाङले एनसिएफ नेपालमा लामो समय देखि रित्तारहेको महासचिवको पदमा सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्वन गर्दै नयाँ महासचिव नियूक्त गर्न पाएकोमा खुशि व्यक्त गर्नु भएको थियो । यसै अवसरमा अध्यक्ष ज्यूले निवर्तमान उपमहासविच डा. के.बि. तामाङलाई बिषेश धन्यवाद दिर्दै एन.सि.एफ. नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि का.मु. तथा उपमहासचिवको रुपमा सेवा गर्नुभई संस्थालाई पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गर्दै संस्थाको तर्फबाट कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । लगातै नवनियक्त महासचिवलाई स्वागत गर्दै नियूत्ती पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त महासचिव एल्डर शेर ए.सी.ज्यूले नियुत्ती पत्र ग्रहण गर्दै स्वागत सभालाई सम्वोधन गर्नुभई आफु भन्दा ६ बर्ष जेठा संस्थामा कार्यकारी महासचिव भएर धेरै पुराना अग्रज पास्टर–गुरुजनहरूस“ग मिलेर सेवा गर्ने अवसर पाएको र आफुलाई सवै मिलेर भव्यरुपमा स्वागत गर्नुभएकोमा आभार प्रकट गर्नुभएको थियो । धेरै अग्रज तथा सहपाटी मित्रहरूले यस संस्थालाई माथि उकास्न आफुमाथि ठूलो भरोसा र आशा राख्नुभएको ले प्रार्थनासहित केही नया“ सोच र उद्देश्यका साथ यो जिम्मेवारी लिन आएको कुरा वताउनु भएको थियो । यहा“ आफुले गर्नुपर्ने थुप्रै चुतौतिहरु छन् मण्डलीहरूको पनि ठूलै आशा र अपेक्षाहरू छन् जसलाई पुरागर्ने आफ्नो प्रयत्न रहने कुरा र सवैको साथ र प्रार्थनाको अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यसरी नै आफ्नो दर्शन बाड्न सम्वन्धमा एन.सि.एफ. नेपालको लागि महाचिवको रुपम रहेर प्रार्थमिकताको भावी दिनमा गरिने कार्ययोजनाहरुलाई वुदगत रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसअन्तर्गत
 मण्डली समुदाय स“गस“गै प्रक्रियाको प्रयोग सुसमाचारका नया“ तरिका र प्रयोगहरूको खोजी ्
कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न मण्डलीका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नवनियूक्त महासचिवलाई बधाई तथा सफल कार्याकालको लागि शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यस्तै गरि मनतव्य दिने क्रममा निवर्तमान उपमहासचिव डा. कर्ण बहादुर तामाङज्यूले आफ्नो कार्यकालभर सहयोग पुर्उनुहुने सवैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संस्थाको लागि सहि समयमा सहि व्यक्ति प्राप्त भएको मा नवनियूक्त महासचिवलाई बधाई तथा सफल कार्यकालाको शुभकामन दिनुभयो ।
कार्यक्रमलाई एनसिएफ नेपालका कार्यसमितिका सहसचिव रेभ.पा. हिमालराई ज्यूले कुशलता पुर्वक संचालन गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त महासचिवको स्वागत समापन पछि आफ्नो कार्यकक्षमा गई पदभार ग्रहण गर्दै मण्डली सदस्यताको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
Posted in Articles, News1 Comment on एन.सी.एफ. नेपालका नवनियूक्त महासचिवको स्वागत तथा पदभार ग्रहण
हाँस्य चलचित्र झिल्के
Posted on August 16, 2018 August 16, 2018 by BACHAN TV
अमेरिकाबाट फर्केका सिवी गहतराजले पत्रकार सम्मेलनमा के के बोल्नुभयो त ?
Posted on August 9, 2018 August 10, 2018 by BACHAN TV
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न,
अध्यक्षको अमेरिका भ्रमण र नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता लगायत वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी…
२०७५ साउन २४ गते । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले आज काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघका अध्यक्ष सि.वि. गहतराजज्यूले हालै गर्नुभएको अमेरिका भ्रमण र नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता लगायत वर्तमान अवस्थाका बारेमा आफ्ना धारणा जानकारी गराउन एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा गत जुलाई २४ देखि २६ तारिख २०१८ सम्म अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मन्त्री स्तरीय वासिङ्टन डि.सी. स्टेट डिपाटस्थित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उठेका र छलफल भएका विषयका साथै आफ्नो त्यहाँको सरकारी निकायका अधिकारी लगायत विभिन्न पक्षसँग भएको भेटघाटका बारेमा महासंघका अध्यक्ष सि.वि. गहतराजज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो । सो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूको पक्षमा उठेका विषयबस्तुमाथि घनिभूत छलफल भएको कुरा समेटिएको प्रेस विज्ञप्ति समेत वितरण गरिएको थियो । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धीमा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रतामा थप प्रतिवद्धता गर्न र नेपालमा रहेका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय र ख्रीष्टियन समुदायको विशेष सुरक्षा र धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि अमेरिकी सरकारका विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल समेत भएको कुरा उहाँले बताउनुभएको थियो ।
आगामी भदौदेखि लागू गर्ने भनिएको फौजदारी विधेयकलाई प्रतिशोधको हिसाबले र कुनै समुदायलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएकाले तत्काल खारेज गर्न समेत अध्यक्ष गहतराजज्यूले माग गर्नुभएको छ । उहाँले आफूले इच्छा गरेको धर्म मान्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई कसैले हनन गर्न नपाइने भन्दै नेपाल सरकारलाई गैरन्यायिक विधेयक फिर्ता लिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । विभिन्न समयमा नेपाल सरकार र महासंघबिच भएको ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्दै समाधि स्थल लगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालका अध्यक्षज्यूले जोडदार माग समेत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका सचिव पास्टर उद्धव चिमौरियाज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ सहअध्यक्ष रेभ. फिलेमोन क्षेत्रीज्यूले शुरुको प्रार्थना गर्नुभएको थियो भने अर्का सचिव पास्टर हेम बहादुर थापाज्यूले त्यहाँ वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
तिम्रो गोख्रे खबर कागत् र तिमीलाई आज धेरै सम्झेको छु ।
– हरि जिज्ञासु महान काम गरेका तर ओझेलमा परेका तिमी पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको ४ जुलाइ १८५१ मा काठमाण्डौंको ठमेल स्थित ठहिंटी टोलमा कान्छो छोरोको रुपमा जन्म भएको हो भन्ने कुरा पढेको छु र सुनेको छु । देशमा राणाहरुको शासन प्रणालीमा बाँचेका तिमी र तिम्रो परिवार संधै राणाहरुले गरेको अत्यचार सहेर बसेका थियौ । राणहरुको अत्याचार सहन नसकी तिम्रो दाजु प्रभुनारायणले नेपाल छोडेर दार्जिलिङ बसाई सरे । तिम्री आमा राजमति प्रधानको मृत्यु भएपछि तिम्रो जीवन केहि कष्टकर बन्यो । तिम्रो पारिवारिक अवस्था कमजोर भएपछि तिम्रो दाजु प्रभनारायणले तिम्रो परिवारलाई दार्जिलिङ आउन भनि खबर पठाएपछि तिमी करिब साडे नौ वर्षको उमेरमा दार्जिङ गयौ । पढेर असल मान्छे बन्ने, जागिर खाने र पैँसा कमाउने सपना र सोच तिम्रो दिमागमा कहिल्यै आएन । आओस् पनि कसरी ? तिमीलाई तिम्रो परिवारको नाजुकपनले संधै पिरोलिरहन्थ्यो । सायद पारिवारिक अवस्था कमजोर भएकोले होला तिमी कापि र कलम बोकेर स्कुल जाने समयमा डोको र हाँसिया बोकि चिया बारीमा गयौ । चिया बारीमै रमायौँ । चियाका पत्ताहरुसँग तिमीले मितेरी गाँस्यौँ । तिमीले वेदनाका खुट्किलाहरु विस्तारै पार गर्दै गर्दा तिम्रा वुवा रुपनारायणले कान्छी आमा भित्रियाय । अनि तिमीले थप कान्छी आमाले दिएको पिडा डोकोमा बोकि कहिले चिया बारीमा लिन्थ्यौ । त कहिले आँसुले बगाउँथ्यौं । सायद तिमीलाई परमेश्वरले तिम्रो आमाको गर्वमा हुनुभन्दा पहिले नै नेपालको ख्रीष्टियन इतिहास रच्न भनेर सृष्टि गर्नभएको हो जस्तो लाग्यो । तिमी कलिलो उमेरमा चियाबारीमा काम गरेर करिब १९ वर्षको उमेरमा स्कुल गयौ । उमेरले पाको र बहुआयमिक अर्थात अनुभवी भएकाले तिमी पढ्ने स्कुलमा कहिलेकाहिँ तिमीलाई पढाउने शिक्षक बाहिर गएको बेला तिमी करिब ८÷९ महिना पढेपछि शिक्षक भइहाल्यौ । तिमी त्यतिखेर नै आफू पढ्दै र पढाउँदै गरेर करिब ४ वर्षसम्म शिक्षक बन्यौँ । त्यहि समयमा तिमीले सुसमाचार सुनेर प्रभलाई विश्वास गर्यौँ । त्यतिखेर तिमीलाई संसारका सबै कुरा हात पारेर अनन्त जीवन हात पार्न सकिएन भने के लाभ भन्ने बाइबलको बचनले मोहित पार्यो । त्यतिखेर येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाए जस्तै थियो । जव तिमीले परमेश्वरको बोलावटलाई बुज्यौँ र नेपाली दाजुभाईहरुको मुहारमा येशू ख्रीष्टिको प्रेम झल्किरहेको देख्यौँ । अनि लाग्यौँ परमेश्वरको बोलाएर गर्न लगाएको काममा निरन्तर । तिम्रो मुख्य योजना त्यतिखेर नेपाली दाजुभाईहरुलाई ख्रीष्ट चिनाउँनु थियो । त्यहि उद्देश्यले हिड्यौँ । नेपाली भाषको विकासमा लाग्यौं । नेपालीहरुले प्रभुको बचन सजिलै आफ्नो भाषामा पढ्न र बुझ्न सकुन भनेर पहिलो कुरा नेपाली भाषामा बाईबल अनुवाद गर्न सुरु गर्यौँ । र तिम्रो योजना सफल भयो । अर्को महान काम सुसमाचारको लागि भनेर आफ्नै प्रेस खरिद गरी अहिलेको गोख्रापत्र राष्ट्रिय दैनिक स्थापना हुनुभन्दा ४ महिना अगाडि सुसमाचार प्रचारकै लागि भनेर गोख्रे खबर कागत् नामको मासिक पत्रिका प्रकाशन गरेर नेपालीहरुलाई थप जनचेनामुलक र प्रभुको सुसमाचार सुनाउँने काम गर्यौँ । तिम्रो यो महान अभियान र महान कामलाई आज पनि सम्झिरहेको छु । तिमीले नेपाली भाषा र साहित्यमा यति ठूलो योगदान पु¥यायौँ तर तिमी नेपाली इतिहासमा संधै ओझेलमा परिरहयौँ । आदि कवि भानुभक्त र मोतिराम भट्ट जस्ता कविहरु तिम्रा साथीहरु थिए । उनीहरुको नाम हामीले पढ्ने कितावमा पढ्दा कहिलेकाहिँ तिमीलाइ सम्झन्छु र प्रश्न गर्छु । “तिमी किन इतिहासमा कैद भयौन् ?” एक पटक मन मनै सोच्छु “तिम्रो इतिहास स्वर्गमा रचिएको छ ।” परमेश्वरले तिमीलाई ठूलो इनाम दिनुभएको छ । तिमी अहिले पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको नामले चिनिएका छौँ । तिम्रो योगदान नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको लागि अतुलनिय छ । त्यसैले भोलि मनाइने तिम्रो १६७ औँ स्मृति दिवशको अवरमा तिमीलाइ सम्झन्छु र तिम्रो महान योगदान प्रति अति आभारी छु । तिमीले रचेजस्तै इतिहास अब नेपालका पास्टरहरु, पत्रकारहरु,र मिशनरीहरुले रच्नुपर्नेछ । र हरेक नेपालीले तिम्रो सम्मान गर्नुपर्नेछ । तिम्रो योगदानलाई भुल्नेहरुले इतिहास रच्ने प्रयास गर्दैनन् जसले तिम्रो इतिहास बुज्ने गर्छ त्यसले महान इतिहास रच्ने प्रयास गर्नेछ । त्यसैले म तिमीले नेपाली इसाई पत्रकारितामा पु¥याएको योगदाको गदर गर्दै तिमीलाई सम्झी रहेको छु । तिम्रो १६७ औँ स्मृति दिवश असलसाथ सम्पन्न होस् । शुभकामना ।